GUOWANG R130Y AUTOMATIC HOT-FOIL STAMPING MACHINE
Mpaghara kpo oku 20
3 Ogologo ogologo, 2 eriri foil transversal
Mgbakọ ụkpụrụ nke akpaaka site na kọmpụta nwere ọgụgụ isi
UNIT na-ekpo ọkụ
Nrụgide stampụ nke YASAKAWA Servo System na-achịkwa.
Abụọ direction foil na-ekewapụ ọkpọ maka nnukwu stampụ nha.
Mpaghara 20 kpo oku
Kewapụ njikwa okpomọkụ site na servo na ± 1℃ ndidi.
3 Longitudinal (Max. 6), 2 Transversal foil shaft site YASAKAWA servo control
Oke.Dayameta foil 250mm
Ihe nchọpụta nkwụsịtụ foil
ONYE JI NKE
Enwere ike ịdọpụ ihe njide foil maka mgbanwe dị mfe
2 Led ihuenyo mmetụ na igwe, 1 iche iche Led ihuenyo mmetụ maka njikwa foil-stamping
Kọmputa nwere ọgụgụ isi ga-agbakọ wee nye azịza kachasị mma maka ụkpụrụ dị iche iche site na ọbụna nzọụkwụ ma ọ bụ ịwụ elu
Kọmpat foil REWINDER
Kọmpat foil rewinder bụ ọkọlọtọ na igwe
Micro-ngbanwe nke ọnwụ ike (nrụgide ziri ezi nwere ike ruo 0.01mm, Max.Nrụgide anwụ anwụ nwere ike iru ton 300) site na ngwa worm nke servo moto na-ebugharị ma na-achịkwa ngwa ngwa site na ihuenyo mmetụ inch 15.
Ịcha efere nke dị iche iche ọkpụrụkpụ (1pc nke 1mm, 1 pc nke 3mm, 1 pc nke 4mm) maka mfe ọrụ-agbanwe.
Ngalaba Stamping Foil
Onye na-achịkwa nke ọ bụla na-achịkwa programmable foil pull rollers (usoro 3 na longitudinal na 2 set in transversal direction) nke YASKAWA servo Motors na-anya.
Longitudinal full format foil nri usoro maka stamping na 2 direction n'otu oge nke na-enyere aka nke ukwuu na-azọpụta foils nakwa dị ka oge ịgbanwe foils.
20 n'otu n'otu na-achịkwa kpo oku zones, iji intubation kpo oku usoro, na a ndidi n'ime ± 1C
1 set nke ductile iron mmanụ aṅụ na-achụ na ihe mkpuchi maka anwụ
Ngwa ebe obibi maka nnukwu stampụ mpaghara
2 direction ikuku ịfụ nkewa ngwaọrụ
Usoro ahịhịa na-ewepụ foil eji eme ihe n'akụkụ igwe, ebe enwere ike ịnakọta ya ma tụfuo ya.
Ihe mmetụta anya na-achọpụta nkwụsịtụ foil.
Nhọrọ foil rewinder WFR-280 iji tụfuo foil eji eme ihe, mee ka ọ ghara imerụ foil n'ogwe isii kwụụrụ onwe ya na modul raara onwe ya nye.
Nke gara aga: GUOWANG C80Y AUTOMATIC HOT-FOIL STAMPING MACHINE
Osote: EF-650/850/1100 Mpempe akwụkwọ nchekwa akpaaka
Okpokoro nnyefe dị elu ruru 1350mm.
Enwere ike ịgụta ikpo site na ihe mmetụta anya (ọkọlọtọ) yana otu ahụ nwere ike jikọta ya na ngwaọrụ maka ịtinye mpempe akwụkwọ n'ime ikpo (nhọrọ).Ọ ga-eme ka ọ dị mfe iwepụ oghere ma tinye ha n'ime igbe.
Mgba ọkụ cam eletrọnịkị na koodu
Ikpokoro ọrụ na njikwa kpo oku; 1 igbe ngwaọrụ na akwụkwọ ntuziaka ọrụ.
GUOWANG C-106Y anwụ-egbutu na foil stamping MA...
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Guowang akpaaka
Mpempe akwụkwọ-stamping na-egbutu akpaaka